Marka laga soo tago qiimihiisa, mushaharkiisa iyo imaanshaha Griezmann, maxay tahay sababta kale ee ay Barcelona isaga diidday saxiixa Neymar Jr? – Gool FM
(Barcelona) 23 Maaro 2021. Tan iyo markii uu Neymar Jr isaga dhaqaaqay kooxda Barcelona xagaagii 2017, waxay Barca sameysay isku dayo kala duwan oo ay ku dooneysay inayn dib ula soo saxiixato.
Neymar ayaa ku biiray xagaagaas kooxda Paris Saint-Germain taasoo miiska saartay qiimaha lagu jebin karo heshiiskii uu ku joogay Camp Nou.
Si kastaba ha ahaatee, xagaagii 2019 ayay Barcelona dadaalkeeda ugu badan isugu geysay lasoo wareegista xiddiga reer Brazil, hase ahaatee, sida uu xaqiijiyay agaasimihii iska casilay xilkiisa sanadkii hore ee Eric Abidal, maamulka kooxda ayaa ku guuldarreystay inay dhammeystiraan saxiixa laacibkan.
Abidal ayaa xaqiijiyay in maamulka Blaugrana ay Neymar ka dalbadeen inuu la laabto dacwadii uu ka gudbiyay kooxda ee ahayd inuu ku leeyahay gunnooyin aysan siinin, balse laacibka uu ka dhiidhiyay, taasna ay sababtay in madaxweynihii hore ee Josep Maria Bartomeu dadaalkiisa uu u weeciyo lasoo saxiixashada Antoine Griezmann.
“Mid ka mid ah doodaha kasoo hor jeeday lasoo wareegista Neymar waxayn ahayd in maxkamadda uu u yaallay kiis uu kaga dacwoonayay kooxda, taasna ma ahan mid sahlan” ayuu yiri Abidal.
Waxaana difaacii hore ee Barcelona uu intaas sii raaciyay: “Waxay u sheegeen inuu la laabto dacwada haddii uu doonay inuu kooxda kusoo laabto”.
Hase ahaatee, Abidal ayaa sheegay inaysan taasi caqabad ku noqon isaga, maadaama markii ay dacwadaas dhacaysay uusan isaga kooxda shaqo ka heyn, balse madaxweynaha Barca uu doortay inuu halkaas kusoo af jaro damacii gacan ku dhigista Neymar.
"Dhab ahaan ma u maleynayo inay adag tahay!" - Beckham oo ka hadlay lasoo saxiixashada Ronaldo iyo Messi